Ukukhutshwa kweeNkcukacha eziBalulekileyo-liHlabathi ngoMatshi
Inikezwe imeko ekhethekileyo e-Itali
26 / 02 / 2020 25 / 02 / 2020 yi Antonio Gancedo
IQela labaKhuthazi base-Italiya leSibini leHlabathi Matshi ngoXolo kunye nokungaxhamli liveza, kwindawo yokuqala, amazwi ovelwano kunye nokusondelana kunye namaxhoba e-COVID 19 yintsholongwane kwihlabathi liphela kwaye ngakumbi e-Itali. Ingxamiseko eveliswe kukunyuka kwamatyala kwilizwe lethu kunye namanyathelo ahambelanayo kunyanzelekile
IHlabathi Matshi kwiRiphabhlikhi yaseRiphabliki yaseCzech
21 / 02 / 2020 yi Antonio Gancedo
Kwiintsuku ezili-141 ku-Matshi bekukho kumazwe angama-45, ngaphezulu kwezixeko ezingama-200 kwilizwekazi lonke "Siziintsuku ezili-141 kwaye ngeli xesha uMatshi-jikelele wenze imisebenzi kumazwe angama-45 nakwizixeko ezingama-200 kuzo zonke amazwekazi. Oku kwenziwe kwenzeka ngenkxaso yemibutho emininzi, ngakumbi
Uninzi lwamazwe axhasa i-TPAN
23 / 11 / 2019 22 / 11 / 2019 yi Antonio Gancedo
Ukusukela namhlanje, i-22 / 11 / 2019, inkxaso ye-Nuclear Weapons Prohibition Therapy iyaqhubeka ikhula, ukusuka kumazwe e-120 ekuqaleni amazwe sele eyi-151 amazwe awaxhasayo, kuwo i-80 sele iyisayinile kwaye i-33 iyivumile. Silahlekile nje i-17 yokuqalisa ukusebenza. Izikhundla zikazwelonke kwi
Tsalela ungenelelo lwe-UN eBolivia
14 / 11 / 2019 12 / 11 / 2019 yi Antonio Gancedo
CELA UMGAQO-NKQUBO WOKUGQIBELA WOKUXELWA NOKUFUNYANWA KWE-UN TO INTERVENE KWI-BOLIVIA EMVA KOKUVUNYELWA KWENDLELA YOKUZIPHATHA NGOKUGQIBELA EMVA KOKUHAMBELWA KWEXESHA LOMatshi ngo-Matshi weHlabathi loXolo- ngoxolo kunye nokungathathi cala kuluntu. I-United Nations
Ukuqaliswa kwe2 yeHlabathi Matshi
14 / 11 / 2019 04 / 10 / 2019 yi Antonio Gancedo
Le 2 ye-Okthobha ye-2019, kwiSangqa soBugcisa obuhle baseMadrid, emva kokuqala komqondiso weHlabathi ngoMatshi km kmNNUMX wePuerta del Sol, yenzeka ngeSangqa soBugcisa obuhle, isenzo esisemthethweni esaphawula ukuqala kwawo . Ibizinyaswe zizithethi ezininzi ezahlukeneyo
I-Matshi yeHlabathi iqala eKm0
14 / 11 / 2019 03 / 10 / 2019 yi Antonio Gancedo
IMadrid, i-2 yango-Okthobha ye-2019, uSuku lweHlabathi lweeNtlanga. Abahamba ngekhulu, abanye bevela kwamanye amazwekazi, babizwa kwi-Km 0 ye-Puerta del Sol eMadrid ukuyobonisa ukuqala kwe-2 World Matshi ngoXolo kunye nokuNgenzi nto. Baye bakhumbula ukuba i-10 kwiminyaka eyadlulayo, ngokufanayo
Ukuqaliswa ngokusemthethweni kwe-2ª kwiHlabathi leNkqantosi yoxolo kunye nokungabikho komthetho eMadrid
22 / 04 / 2019 09 / 11 / 2018 yi admin
Ukuphehlelelwa ngokusesikweni kwe-2 yeHlabathi yoXolo ngoXolo kunye nokungaPhathi kakuhle kwenzeka ngoNovemba 7 ye2018, ngexesha leNdibano yeHlabathi ye-II kwiNdawo yoBundlobongela baseDolophini kunye neMfundo yoLungelelaniso noXolo, eMadrid. I-2 World Matshi, ikhuthazwe kwaye iququzelelwa ngumbutho wamazwe omhlaba wobuntu Mundo sin Guerras
Ihlabathi lesiBili uMashi woxolo liya kudlula eColombia
22 / 04 / 2019 08 / 11 / 2018 yi admin
Emva kweminyaka elishumi yohlelo lokuqala, kulindeleke ukuba eli xesha liwele amazwe angaphezu kwekhulu kumazwekazi amahlanu. IMadrid ibambe umboniso wale march, eza kuqala i-2 ye-Okthobha ye-2019 kwaye iqukumbele i-8 yango-Matshi we-2020. Apho kwabhengezwa ukuba iColombia iza kuba yenye